मनसुन ढिलाई हुँदा देशभर गर्मी, चिसो गुमाउँदै जुम्ला | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
मनसुन ढिलाई हुँदा देशभर गर्मी, चिसो गुमाउँदै जुम्ला
काठमाडौं । नेपालमा मनसुन आइपुग्न ढिलाइ हुँदा गर्मी व्यापक बढेको छ । सोमालिया आसपास बन्ने मनसुनी बादल बंगालको खाडीसम्म विकसित हुँदै आए पनि नेपाल पसिसकेको छैन ।
“मनसुनको बादल बंगालको खाडीसम्म सिर्जना भएपनि त्यो बढोत्तरी हुँदै नेपाल आउन सकेको छैन,” मौसमविद गंगा नगरकोटीले भने, ‘’प्रिमनसुन कमजोर बनेको यो बेला गर्मी बढ्छ । त्यो बादल नेपाल आउन मनसुनका केही मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । तर अरब सागरमा आइरहेको फानी आँधीले मनसुन विकसित हुन दिइरहेको छैन ।’’ यसअघि असारको पहिलो साता मनसुन शुरु हुने अनुमान गरिएको थियो ।
चक्रवातले बंगालको खाडी र आफ्नै क्षेत्रको पानी पर्ने वाष्पयुक्त मोइस्चरलाई तानेर लगिरहेको मौसमविद्को भनाइ छ । नगरकोटी भनछन्, “दक्षिण भारत आइपुगेको मनसुन त्यही रहेकोछ ।” अरब र बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुने जलवाष्प सहितको संयुक्त उच्च चापीय वायु नै नेपालको मनसुनको मुख्य आधार हो । उनका अनुसार न्यून चापीय रेखाले नेपालको हिमाली रेखा छुनु पनि वर्षा हुने एउटा आधार हो ।
वरिष्ठ मौसमविद मदनलाल श्रेष्ठका अनुसार मनसुन सुरु हुन उच्च चापीय दक्षिणपूर्वी वायुले न्यून चापीय पश्चिमी वायु विस्थापित गर्नुपर्छ । “पश्चिमी वायुको गति र प्रभाव कम हुँदै जाँदा पानी पर्छ र धर्तीमा बढ्दो तापमान सन्तुलनमा आउने हुँदा मानिसले राहत महसुस गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर मनसुन प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा अत्यधिक गर्मी भएको हो ।” मनसुन सुरु हुने बेला प्रायः यही खालको तापमान देखिने भएपनि यो वर्ष अलिक लामो भएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडौमा गत वर्षभन्दा बढि
प्रिमनसुन लागे यता जुन १४ अर्थात् जेठ ३१ गते शुक्रबार काठमाडौँमा अत्यधिक गर्मी महसुस गरियो । मुख्यतः मे महिनालाई नेपाल र भारत लगायतका देशमा बढी गर्ने हुने महिनाका रूपमा चिनिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस जोगिएलान् पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय र ग्यालरी बैठक ?
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसवर्षको मे महिनाको ३२.५ डिग्री तापक्रमको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै शुक्रबार काठमाडौँको तापक्रम माथि उक्लिएको हो । शुक्रबार ३३.५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्र रेकर्ड भयो । गतवर्ष सन् २०१८ को मे महिनामा सैभन्दा बढी ३१.५ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । सन २०१७ को मे महिनामा काठमाडौंमा ३१.६ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको थियो ।
तातिँदै मुख्य शहर
अघिल्लो महिना विराटनगरमा औसत ३५ डिग्री आसपास तापक्रम थियो । तर अहिले बढेर ३८.०डिग्री तापक्रम पुगेको छ । गतवर्ष जुन १० का दिन ३७.८ डिग्री तापक्रमको रेकर्ड यसपाला विराटनगरले पछि पारेको छ ।
चिसो गुमाउँदै जुम्ला
चिसो जिल्ला मानिने जुम्लाको चिसो पनि यसपालाको गर्मीले पगालेको छ । जुम्लामा शुक्रबार २९.७ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको छ । गएको वर्ष पाँचदिन अघि जुन १० का दिन २९.१ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । गएको वैशाख २९ गते जुम्लामा २५.५ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । सन् २०१७ मे महिनामा जुम्लामा २७.५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको थियो । त्यस्तै सन् २०१८ को जुन महिनामा २७.३ डिग्री थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रतिबन्धित भारतीय नोट सहित ६ जना पक्राउ
जलतथा मौसम विज्ञान विभागकी मौसमविद प्रतिभा मानन्धरका अनुसार सन १९९५ को जुन ५ मा धनगढीमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ४६.४ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । त्यही साल नेपालगञ्ज ४५ डिग्री तातो भयो । मौसमविद्का अनुसार अझै एकसाता पहाडी भेगमा अत्यधिक गर्मी रहनेछ । तराइमा भने अलिक लामो समय गर्मी रहनेछ । गत साता नै आइपुग्नु पर्ने मनसुन यो वर्ष एकसाता ढिला हुने मौसमविद्को भनाइ छ ।
२,असार.२०७६,सोमबार ११:०० मा प्रकाशित
← इन्टरनेटमा अ‌ंकुश लगाइँदै
काठमाडौंमा घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? →